Kianjan'ny Repoblika (Prague), Náměstí Republiky, Kianjan'ny Repoblika, Cappuccino Square, Kianja Josefskaya, Kianjan'i Gibernska, Franz Josef II Square - Prague
Toerana: Náměstí Republiky, 110 00 Nové Město, Repoblika Tseky
Ao amin'ny sisin-tanin'ireo tanàna taloha sy tany Prague dia ny Kianjan'ny Repoblika - toerana tena mahafinaritra ho an'ireo mpizaha tany sy mpankafy tantara. Mahavariana fa ny toerana misy ireo tranombakoka malaza, trano fonenana sy trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra ao an- drenivohitra Czech dia mifantoka.
Tantaran'ny Kianjan'ny Repoblika
Tany am-boalohany dia nisy tohotra ity toerana ity, mampifandray ny ampahany taloha sy ny tanàna. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-12 sy faha-13, dia niorina teo amin'ny Kianjan'ny Repoblika any Prague ny fiangonan'i St. Benedict, izay niantomboka ny fivoaran'ny distrika. Tao anatin'ireo taonjato XIX-XX dia nisy tranobe manan-danja toy ny Trano Municipal (Public) sy ny trano-maizan'i Jiřího-Poděbrady.
Raha jerena amin'ny faritra manodidina ny Repoblika, amin'ny endriny maoderina dia niseho tamin'ny taona 1960. Tamin'ny 1984, dia nesorina teto ny tranonkala sy ny trolleybus. Nanomboka teo dia nisy tranobe ara-barotra sy tranom-bahoaka maro nanorina eto. Tamin'ny taona 2006, niorina indray ny metro, niparitaka ny faritry ny mpandeha an-tongotra ary napetraka ny lakandrano vaovao.
Toerana mahaliana ao amin'ny Kianjan'ny Repoblika
Tsy misy fitsidihana amin'ny renivohitr'i Tseky ka tsy afaka manao an'io toerana manan-tantara io. Ireo izay voataona amin'ny atmosfera ao amin'ny Kianjan'ny Repoblika any Prague, dia afaka mijanona ao amin'ny hotely telo sy kintana eo an-toerana manodidina. Ny hotely tsara tarehy sy marina indrindra dia ny Hotel Paris, naorina tamin'ny taona 1904.
Raha mijery ny sari-tanin'ny Kianjan'ny Repoblika any Prague ianao, dia afaka mahita fa manodidina azy ny atidoha maro. Ny tena manan-danja amin'izy ireo dia:
Tora-pampana sy vavahady. Ity no faritra manan-danja, izay manondro fa tamin'ny Moyen Âge dia i Prague no nisy fiaramanidina lehibe. Ny haavon'ny toerana avo indrindra dia 65 metatra. Raha mahatratra ny dingana 200 ianao, dia afaka mijery ny deck .
Ny tranon'ny tanàna. Ny tranobe, naorina amin'ny fomba maoderina, dia heverina ho toy ny perla ny rafitr'akanga ao Prague. Ampiasaina ho fampisehoana, concert, baolina ary hetsika ara-kolotsaina hafa.
Theater of Hibernia . Izy no miorina amin'ny fanorenana ny fiangonan'ny fiangonana taloha tao amin'ny tsy fahampian-tsak'i Maria Virjiny. Hibernia dia iray amin'ireo trano fafana ara-teknika mahazatra indrindra ao Prague .
Church of St. Joseph. Ny tranon'ny fivavahana dia naorin'i Melihar Mayer. Mba hanatanterahana izany, nampiasa ny fomba fanao Baroque ny mpanao mari-trano.
Toeram-pivarotana lehibe Palladium. Anisan'ny tranobe malaza indrindra ao an-drenivohitra ny tranokalan'ny trano iray dimy, izay nampiasaina taloha ho an'ny toby miaramila. Ankehitriny misy toeram-pivarotana lehibe, toeram-pandihizana, fialam-boly ary café.
Toeram-pivarotana Kotva. Ny ivontoeran'ny fividianana dia malaza amin'ny fivarotana entana hoditra eto. Niorina tamin'ny taona 1970-1974 ny mpivady iray antsoina hoe Makhoninovs.
Manerana ny kianjan'ny Repoblikan'i Prague, misy fiara efa tranainy maro, izay ahafahanao miala amin'ny zavatra na zavatra. Ho fankasitrahana ny hakantony sy ny fahalehibeazany, dia afaka mandeha eny amin'ny lampihazo ianao, voavoly amin'ny vatokely madinika. Izany dia ahafahanao mandinika tsikelikely ireo toerana na mividy .
Ahoana ny hahatongavana any amin'ny Repoblika e?
Toerana iray mpizahantany malaza no mipetraka eo amoron'ny renirano Vltava. Avy eo afovoan-tanànan'i Prague, ny kisatry ny Repoblika dia misaraka amin'ny 2 km. Afaka manatratra izany amin'ny alalan'ny fitaovam- pitaterana rehetra ianao . Ao amin'ny 160 m miala ny kianja no misy ny metro metro Repoblikan'i Katedral, izay an'ny laharana B ary 70 m avy eo dia misy bus iray sy fiarandalamby mitovy amin'io. Tonga eto ny andalana 6 sy 15, 26, 91, 92, 94 ary 96 ary ny fiara fitaterana Nos. 207, 905, 907, 909 ary 911.
Kolokoloka misy saribakoly sarobidy
Sarimihetsika mikasika ny fitiavana ny ankizy
Rabià amin'ny alika - soritr'aretina
Birra eto an-tany - mahasoa sy mampalahelo
Hazo papier voapoizina
The Green Socket
Ahoana no fomba amoahako ny findaiko tsy misy fiatoana?
Ahoana no hanatsarana ny fahasamihafana amin'ny lehilahy orgasme?
Photoshoot miaraka amin'ny sipany
Kabinetra eo amin'ny balcony
Manicure miaraka amin'ny lavaka - fomba fanao mahazatra sy lamaody vaovao
Nahoana isika no manonofy momba ny trondro?
Fampahalalana momba ny fizarana fizarana seza mifanaraka amin'ny fahitana
Voninkazo isan-taona ho an'ny fonenana fahavaratra